Slackware 14: Broadcom BCM43XX ယာဉ်မောင်းများကိုတပ်ဆင်ပါ Linux မှ
Slackware 14: Broadcom BCM43XX Drivers ကို Install လုပ်ပါ
DMoZ | | GNU / Linux များ, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
မကြာသေးခင်ကပဲ GNU / Linux honeys, HP 530 ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြိုးစားချင်ပေမယ့်အရမ်းရှက်တတ်တဲ့ Notebook တစ်လုံးပေါ်လက်ကိုတင်လိုက်တယ်။
ဒီချစ်စရာအီလက်ထရွန်နစ်တိရိစ္ဆာန်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့သိလိုစိတ်များအကြားအကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်သာရှိတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာပန်းကန်တစ်ခုဖြစ်တယ် Broadcom BCM4312 ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုတာဝန်ယူသည် အားလပ်ချိန် တန်ဖိုးရှိရှိအလုပ်လုပ်အချိန်။
များသောအားဖြင့်ဤအမျိုးအစားပြားများမှာများသောအားဖြင့်ဘာသာရပ်နှင့်ဖြစ်တည်မှုတွင်ဗဟုသုတနည်းသောခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ပျင်းရိ 14 ဤအခါသမယတွင်အဓိကအနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း၊ တစ်ချိန်တွင် Odyssey ချဉ်းကပ်နေပြီဟုထင်မြင်ယူဆနိုင်သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဒီပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ် ရိုးရာ ဒါပေမယ့်နှင့်အတူ Archlinux စိစစ်ဖို့အတွက်ဖြန့်ဝေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့၊ ဒါကမော်ကွန်းတိုက်ပွဲမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်အရာအားလုံးကိုစနစ်တကျနဲ့ ၁၀၀% အလုပ်လုပ်ဖို့ခဏလောက်ယူခဲ့ပါတယ်။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် ပျင်းရိ 14, အလုပ်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
El ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းကန်၏မော်ဒယ်ကိုသိရန်ဖြစ်သည် Broadcomအဘယ်အတွက် (root mode) ကိုရိုက်သည်၊
ဘာကိုငါတို့ပစ်လိမ့်မည် ရလဒ် ဒါနဲ့ဆင်တူတယ်
ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားတဲ့အကြားကိန်းအရေအတွက်က ဒီဥပမာကို [14e4: 4318].
ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ ငါတို့သည်ဤစာမျက်နှာကိုသွားပါ အတွက် သတ်မှတ် Que Controller ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ရမည်။ b43 o b43 ဂုဏ်သိက္ခာ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ controller ကိုဆိုပါက ထောက်ပံ့ခဲ့သည် နှင့်ငါတို့သိသောဥာဏ်၌တည်၏ slackbuilds အလုပ်လုပ်ပုံကို ငါတို့ရိုက်တယ်၊
ဤအရာပြီးသည်နှင့် module ကိုသာတင်ပါ။
ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်သည်လက်ခံရရှိသည့်အချက်ပြမှုကြောင့်အလွန်စိတ် ၀ င်စားရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Slackware 14: Broadcom BCM43XX Drivers ကို Install လုပ်ပါ
Mr. linux ဟုသူကပြောသည်
DMoZ: မင်းကိုချီးကျူးပါတယ်၊ မင်းကဒီခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုကိုသစ္စာရှိဆဲပါ။ ငါ့ကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးမယ့် Slack ကိုမွမ်းမံဖို့ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းညွှန်တွေပေးမယ်ဆိုရင်တော့ငါဟာတခြားမှတ်ချက်များမှာပြောခဲ့တာပါ။ အသေးစိတ်ကျတဲ့အချက်တွေအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ နောက်ဆုံးကိစ္စကိုငါနောက်ဆုံးအကြိမ် update လုပ်တာကသူတို့ဟာငါ reinstall လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပရိုဂရမ်ငါးခုနဲ့တူတူအလုပ်ရပ်တန့်သွားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ KDE နဲ့ kernel ကိုပြwithoutနာမရှိဘဲမွမ်းမံခဲ့ကြပေမယ့်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Mr. Linux
Slackware ကို install လုပ်ပြီးမှကျွန်ုပ်မှာပြproblemsနာမရှိဘူး၊ ပစ္စည်းကိရိယာသည် HP Probook 4420s ဖြစ်သည်။ ယခုမှတ်စုရေးထားသည့်နေရာမှငါဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း HP 530 ဖြစ်သည်။
ငါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုအပ်ပါတယ်ဆော့ဖ်ဝဲကို install လုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံထားပါပြီ, ထူးခြားသောအဘယ်အရာကိုမျှ, အရာအားလုံးငါ့အဘို့အံ့သြဖွယ်အလုပ်လုပ်ဆက်လက်, စပ်စုသင့်ရဲ့အမှုဖြစ်တယ်, Slack များသောအားဖြင့်အဆင်မပြေအမျိုးအစားကိုမပေးပါဘူး, ကလျှောက်လွှာကိုသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ရပ်တန့်သိရန်ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။
Juan Mauricio Yaman yusuf ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
Slackware 14.2 32BITS တပ်ဆင်ခြင်း DVD ကို
RUFUS 2.18 တွင်ဖန်တီးထားသော USB ပေါ်သို့တင်ပါ
ငါ command line တွေရေးခဲ့ရင်မင်းပေးလိုက်တာကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
ခ43သို့မဟုတ်အထုပ် bXNUMX -fwcutter မတွေ့ - ခုန်ကျော်သွားသည်
ခ43သို့မဟုတ်အထုပ် bXNUMX-firmware ကိုမတွေ့ပါ - ခုန်ကျော်သွားပါ
ကျွန်တော့်ဖိုင်ကို b43legacy-firmware.tar.gz လို့ခေါ်တယ်
၎င်းသည် hp-mini110 ဖြစ်ပါသည်။ ပန်ကာကေဘယ်များ၏အရောင်သည်မည်သည့်အရောင်ရှိသလဲဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိသော်လည်း၊ မော်ဒယ်ကိုကျွန်ုပ်ထားခဲ့သည်။
01: 00.0 ကွန်ယက်ထိန်းချုပ်သူ: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b / g LP-PHY (တည်းဖြတ် 01)
02: 00.0 Ethernet Controller: Qualcomm Atheros AR8132 မြန်သော Ethernet (rev c0)
သင်၏ code လိုင်းများသည်တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းနေသည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်မည်သည့်အစဉ်လိုက်တပ်ဆင်မှုနှင့်မကိုက်ညီပါ
linux နှင့်အတူ Discord Slackware GNU / အပေါ်ချက်ချင်းအဆက်အသွယ်
discord.com တွင်ချက်ချင်းအကူအညီပေးနိုင်သောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခြင်းသည်စတိုင်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူ IRC gamer ကိုချက်တင်စကားပြောပါ
Juan Mauricio Yaman yusuf ကိုပြန်ပြောပါ
အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာ။ ဒါ့အပြင် Slackware ကိုထူးဆန်းတဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ငါစမ်းသပ်နေတုန်းပဲ။
ကျွန်ုပ်သည် Slackware တပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာကိုနောက်ထပ်အသေးစိတ်အချို့ (သို့မဟုတ် 'misprint') ဖြင့်ပြီးအောင်လုပ်နိုင်မနိုင်စမ်းကြည့်ပါ။
အလွန်ကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် Slack နှင့် ပါတ်သက်၍ အနည်းငယ်သောအချက်အလက်များကိုအတူတကွစုစည်းရန်လက်ထဲရှိသည်။ ထို့ကြောင့် distro နှင့်ပတ်သတ်သောသင်ခန်းစာများ၊ အကြံပြုချက်များနှင့်အခြားအရာများအားလုံးအသုံးဝင်လိမ့်မည်။
sbopkg နှင့် slapt-get ကိုချီးမွမ်းပါ။
@ Mr.Linux ဖော်ပြသည့်အတိုင်းသင်သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုသတိထားရမည်။ ငါ့အမှု၌ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ distros များတွင်ထုပ်ပိုးမှုအများအပြားကိုနှစ်သက်ပြီးဤဒေသတွင်သတိထားရမည်။
မင်းရဲ့အလှူငွေအတွက်ခင်ဗျားခင်ဗျားကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ခင်ဗျားဟာ GNU / LINUX မှာသား ဦး လေးတစ်ယောက်ကို Slackware ကိုသုံးပြီးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်
ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တွင် ၄၃၁၂ ရှိ၍ အစပိုင်းတွင်၎င်းကိုဖွင့်ရန်နာကျင်မှုဖြစ်သော်လည်းသီအိုရီအရမည်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက်မဆိုအလုပ်လုပ်သောယေဘူယျနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ် ပို၍ နှစ်သက်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အရသာ၊ အရောင်အတွက် ...
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တင်းကြပ်စွာမလိုအပ်ပါကဘီးကိုအသစ်တီထွင်ခြင်းမပြုရန် =) ...
ငါအမြဲတမ်း broadcom နဲ့အမြဲတမ်းပြproblemsနာတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ slackware ကိုထပ်ကြိုးစားကြည့် ဦး မယ်။ ဒီအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Edgar ဂျေ Portillo ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး၊ Slackware အသုံးပြုသူကိုရှာရန် (ကျွန်ုပ်အတွက်) မည်မျှရှားပါးသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ဘိုးဘွားဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုသို့ပို့ဆောင်ရန်အတွက်ပို့စ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်လိမ့်မည်မဟုတ်သည်မှာသေချာပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘယ်နေရာမှာမှရှာမရဘူး အမြဲတမ်းမသိသောသုံးစွဲသူများအတွက် Slack ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်အသစ် ...
Edgar ဂျေ Portillo မှစာပြန်ပါ
Slackware နှင့်ပါတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်ုပ်ဆောင်ယူလာပါပြီ။ ဤခမ်းနားထည်ဝါသောဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အောက်ပါစာကိုအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမနက်ဖြန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ငါလမ်းလျှောက်ရင်းအနည်းငယ်လမ်းလျှောက်နေသည်။ Slack ရှိဆုရှင်များ၌ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်မသိပါတောင်မှသင်နှစ်သက်သော XD ကိုဆွဲဆောင်သောမှောင်မိုက်ပြောင်နှင့်တူသည်။ သင်၏ဆောင်းပါးသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့လူတိုင်းလိုပဲ) မင်းရဲ့စာမူတွေကိုမင်းစောင့်ကြည့်နေမှာပါ၊
ကောင်းပြီ၊ ငါအဟောင်း 4321 Broadcom ကို install လုပ်သည်။ ကြီးစွာသော Slackware! http://vidagnu.blogspot.com/2013/09/instalacion-linksys-wpc300n-en-linux.html
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ကဒ်သည်စာရင်းထဲတွင်မပါ ၀ င်ပါကမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ BCM43142 ဆိုတာဘာလဲ။
LibreOffice: ရှည်လျားသော spreadsheets များကို Calc ၌မည်သို့ပုံနှိပ်ရမည်နည်း